Baaqa Culumada ilaalinta walaaltinimada Islaamku waa waajib shareeco, loona baahan yahay in laga ilaaliyo arrimo dhowr ah oo xumeeya. | Somalisan.com
Home Afsomali Baaqa Culumada ilaalinta walaaltinimada Islaamku waa waajib shareeco, loona baahan...
Baaqa Culumada ilaalinta walaaltinimada Islaamku waa waajib shareeco, loona baahan yahay in laga ilaaliyo arrimo dhowr ah oo xumeeya.
Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa bulshada ugu baaqay in ilaalinta walaaltinimada Islaamku waajib tahay shareecada, loona baahan yahay in laga ilaaliyo arrimo dhowr ah oo xumeeya.
Previous articleGovernor Sonko arrested following DPP Haji’s orders
Next articleSharciga Doorashooyinka Qaranka oo ay mar kale xildhibaanadu ka doodayaan
Somalisan News - November 8, 2019
Sahmin loogu dhaqaaqay kaydka saliidda iyo gaaska Somalia
Somalisan News - March 4, 2020
Golaha Wasiirada XFS oo ansaxiyey Hindise-sharciyeedka sharciga Laysimada Ganacsiga Soomaaliya.
Dil Fool Xun oo Caawa lagu fuliyey gabar macalimad ka aheyd Dugsiga Raage Ugaas...